2 Samuweli 14 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
14 Ke kaloku uYowabhi+ unyana kaTseruya+ wazi ukuba intliziyo kakumkani yayikuAbhisalom.+ 2 Ngako oko uYowabhi wathumela eTekowa,+ wathabatha apho umfazi osisilumko+ waza wathi kuye: “Nceda, ukhe uzile, uze wambathe, nceda, izambatho zokuzila, ungazithambisi ngeoli;+ yaye umele ube njengomfazi lo ubezilele uthile ofileyo kangangemihla emininzi.+ 3 Yaye umele ungene kukumkani uze uthethe kuye ilizwi elinjengeli.” UYowabhi wafaka ke amazwi emlonyeni wakhe.+ 4 Kwaye umfazi lowo waseTekowa wangena kukumkani wawa ngobuso bakhe emhlabeni,+ waqubuda waza wathi: “Sindisa,+ kumkani!” 5 Wathi ukumkani kuye: “Unantoni na?” Yena wathi: “Enyanisweni ndingumfazi ongumhlolokazi,+ ekubeni ngoku indoda yam ifile. 6 Isicakakazi sakho sasinoonyana ababini, yaye bobabini baqalisa ukusukuzana endle+ ngoxa kwakungekho mhlanguli+ wokubahlukanisa. Ekugqibeleni omnye wambetha omnye waza wambulala. 7 Kwaye intsapho isuke yonke nxamnye nesicakakazi sakho yaye ithi, ‘Sinike umbethi womntakwabo, ukuze simbulale ngenxa yomphefumlo womntakwabo+ ambuleleyo,+ ewe masiyibhubhise indlalifa!’ Yaye ngokuqinisekileyo baya kuwucima umlilo wamalahle am eenkuni oseleyo, khon’ ukuze kungabikho gama nantsalela yabelwa indoda yam phezu komhlaba.”+ 8 Wandula ke ukumkani wathi kumfazi lowo: “Yiya endlwini yakho, mna ke ndiya kunikela umyalelo ngokubhekisele kuwe.”+ 9 Wathi ke umfazi lowo waseTekowa kukumkani: “Owu nkosi yam kumkani, masibe phezu kwam isiphoso, kwanaphezu kwendlu kabawo,+ ngoxa emsulwa ukumkani netrone yakhe.” 10 Waza ukumkani wahlabela mgama wathi: “Ukuba kukho nabani na othethayo kuwe, naye umele umzise kum, yaye akasokuze akwenzakalise kwakhona.” 11 Kodwa yena wathi: “Ukumkani makakhe akhumbule uYehova uThixo wakho,+ ukuba umphindezeli+ usenokungabangeli konakala ngokuqhubekayo yaye basenokungambhubhisi unyana wam.” Yena wathi: “Ephila nje uYehova,+ akukho nalunye unwele+ lonyana wakho oluya kuwela emhlabeni.” 12 Ke kaloku umfazi lowo wathi: “Khawuncede uvumele isicakakazi sakho+ sithethe ilizwi+ kwinkosi yam ukumkani.” Ngoko wathi: “Thetha!”+ 13 Waza umfazi lowo wahlabela mgama wathi: “Kutheni, ke, uqiqa kanje+ nxamnye nabantu bakaThixo?+ Njengoko ukumkani ethetha eli lizwi unjengalowo unetyala,+ ekubeni ukumkani engambuyisi owakhe ogxothiweyo.+ 14 Kuba nakanjani na+ siya kufa size sibe njengamanzi aphaleleyo emhlabeni, angenakuhlanganiswa. Kodwa uThixo akayi kuwususa umphefumlo,+ kwaye ucinge izizathu zokuba efanele angagxothwa kuye lowo ugxothiweyo. 15 Ke kaloku ukufika kwam ndize kuthetha eli lizwi kukumkani inkosi yam, kungenxa yokuba abantu bandenze ndoyika. Ngoko isicakakazi sakho sathi, ‘Makhe ndithethe kukumkani. Mhlawumbi ukumkani uya kwenza ngokwelizwi lekhobokazana lakhe. 16 Ngenxa yokuba ukumkani waphulaphula khon’ ukuze alihlangule ikhobokazana lakhe entendeni yendoda efuna ukundibhubhisa mna nonyana wam oyedwa elifeni esilinikwe nguThixo,’+ 17 ngoko isicakakazi sakho sathi, ‘Ilizwi lenkosi yam ukumkani malibe lelinika ukuphumla.’ Kuba kanye njengengelosi+ kaTHIXO oyinyaniso injalo inkosi yam ukumkani, ukwahlula okulungileyo kokubi,+ yaye ngamana uYehova uThixo wakho angaba nawe.” 18 Ke kaloku ukumkani waphendula waza wathi kumfazi lowo: “Nceda, ungandifihleli le nto ndikubuza yona.”+ Wathi umfazi lowo: “Mayithethe inkosi yam ukumkani.” 19 Waza ukumkani wahlabela mgama wathi: “Isandla sikaYowabhi+ sinawe na kuko konke oku?”+ Wandula ke umfazi waphendula waza wathi: “Uphila nje umphefumlo wakho,+ nkosi yam kumkani, akukho mntu onokuya ngasekunene okanye aye ngasekhohlo kuko konke oko inkosi yam ukumkani ikuthethileyo; kuba ngumkhonzi wakho uYowabhi lo wandiyalelayo, yaye nguye lo wafaka onke la mazwi emlonyeni wesicakakazi sakho.+ 20 Umkhonzi wakho uYowabhi wenze le nto ukuze bujikwe ubuso balo mbandela, kodwa inkosi yam ilumke ngokungathi kungobulumko bengelosi+ kaTHIXO oyinyaniso khon’ ukuze yazi konke okusemhlabeni.” 21 Ukumkani wathi kuYowabhi: “Yabona, ke, ngokuqinisekileyo ndiya kuyenza le nto.+ Ngoko hamba, umbuyise umfana lowo uAbhisalom.”+ 22 UYowabhi ke wawa ngobuso bakhe emhlabeni waqubuda waza wambonga ukumkani;+ yaye uYowabhi wahlabela mgama wathi: “Namhlanje umkhonzi wakho uyazi ndikholekile emehlweni akho,+ nkosi yam kumkani, ngenxa yokuba ukumkani wenze ngokwelizwi lomkhonzi wakhe.” 23 Wesuka ke uYowabhi waya eGeshure+ waza wamzisa eYerusalem+ uAbhisalom. 24 Noko ke, ukumkani wathi: “Makajike aye endlwini yakhe, kodwa ubuso bam akanakububona.”+ Ngoko uAbhisalom wajika waya endlwini yakhe, yaye akazange abubone ubuso bukakumkani. 25 Ke kaloku xa kuthelekiswa noAbhisalom kwakungekho ndoda intle kangako+ kuSirayeli wonke enokuze idunyiswe kakhulu. Ukususela entendeni yonyawo lwakhe kuse elukakayini lwentloko yakhe kwakungekho siphene kuye. 26 Yaye xa eyichebile intloko yakhe—njengoko wayeyicheba ekupheleni konyaka ngamnye; ngenxa yokuba ibinzima+ phezu kwakhe, ebeyicheba—ebezilinganisa iinwele zentloko yakhe, amakhulu amabini eeshekele ngelitye lokulinganisa lasebukhosini. 27 Yaye uAbhisalom wazalelwa oonyana abathathu+ nentombi yanye egama linguTamare. Wayeyinzwakazi.+ 28 Waza uAbhisalom waqhubeka ehleli eYerusalem kangangeminyaka emibini, akabubona ubuso bukakumkani.+ 29 Ngoko uAbhisalom wathumela ebiza uYowabhi ukuze amthume kukumkani, yena ke akavuma ukuza kuye. Wandula ke wathumela kwakhona, isihlandlo sesibini, yena ke akavuma ukuza. 30 Ekugqibeleni wathi kubakhonzi bakhe: “Khanibone isiqwenga somhlaba sikaYowabhi singakwesam, yaye phaya unerhasi. Yiyani nize nisitshise ngomlilo.”+ Ngako oko abakhonzi baka-Abhisalom basitshisa isiqwenga somhlaba ngomlilo.+ 31 Wesuka ke uYowabhi weza kuAbhisalom endlwini waza wathi kuye: “Kutheni na ukuze abakhonzi bakho basitshise ngomlilo isiqwenga somhlaba esisesam?” 32 Ngoko uAbhisalom wathi kuYowabhi: “Khangela! Ndithumele kuwe, ndisithi, ‘Yiza apha ndize ndikuthume kukumkani, uthi: “Ndibuyeleni na eGeshure?+ Ngekundilungele ngakumbi ukuba bendiselapho. Ke kaloku mandibubone ubuso bukakumkani yaye, ukuba kukho nasiphi na isiphoso kum,+ umele ke andibulale.”’” 33 UYowabhi wafika kukumkani waza wamxelela. Wandula ke wabiza uAbhisalom, owathi wangena kukumkani waza waqubuda kuye, esiwa ngobuso emhlabeni phambi kokumkani; emva koko ukumkani wamanga uAbhisalom.+